Namhlanje, ingxoxo yeBill Edith Schippers yokuvalelwa ngaphandle kwecala: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	2 February 2017	• 16 Comments
Ngomhla we-7 Julayi uMphathiswa we-2016 u-Edith Schippers unikezele umyalelo-mthetho owenza ukuba umntu ongeyidaniso kwimibhobho yombuso angavalwa. Ngokuqinisekileyo yenziwe kakuhle kwaye sinemfuneko mabali axhasayo Ukubona i-revue yokudlula, kodwa namhlanje kuya kude. Ikamelo lesibini lixubusha ngalo mthetho-mthetho namhlanje. Ngokuqhelekileyo unokuqhathanisa ingxoxo yegumbi lesibini kunye nesisombululo sokuhlaliswa kwimeko yamatyala. Ummangali uthumela ibango eliphakamileyo ukuba isiphakamiso sokuhlawula siphumelela ngokuqinisekileyo ukuba isiphumo semali ayenqwenela phambili. Ngaphambili ndaqalisa isicelo sokufumana le ntlawulo kwitafile. Lelo phethishini laliphantse Amaxesha e-4589 asayinwe. Kucacile ukuba abantu bayaqonda ingozi yowiso-mthetho. Ngezantsi ndiyichaza kwakhona.
Cinga ukuba unombono ohlukileyo kwimbono yokuba uxelwa kumaphephandaba kwaye ubhalwe ngokuthi "ngcamango". Emva koko oku kungayibhileumntu odidekile'ukuhambisa ngendlela, umzekelo'ukuchasana nokuziphatha okubi'. Ingakumbi ngoku iindaba zendaba ziye zenza konke okusemandleni ukudibanisa izimvo ezahlukeneyo, umzekelo,ngcamango yomhlaba', ilebula'iindaba ezibuxoki'ukunika okanye ukupasa I-Facebook iyayiqwalasela ukunyanzelisa. Kwiminyaka yakutshanje yonke into eyenziwe ukudibanisa ileta 'yendoda edidekileyo' kwimbono eyahlukileyo. Ngokwenene, ehla kuyo. Ngalo myalelo osemthethweni uvela kuNgqongqoshe Edith Schippers, umtshutshisi woluntu unokugqiba ukugqiba wonke umntu ngaphandle kwesohlwayo aze ayeke imithi ngaphandle kokuba adibane nomgula ngengqondo. Ukufunda ngokusemthethweni ngolu hlobo lulandelayo: [catshulwa]
Ngokukodwa kwiidolophu ezininzi kukho iingxelo eziqhelekileyo malunga nabantu abonakalisa ukuziphatha okudidekile, kodwa ngubani ongangxakeli ngokukhawuleza kwabo okanye abanye. Okanye abantu ababhekwa njengengozi kwintsapho yabo kunye nemeko, kodwa ngubani ongakwazi ukufihla le ngxubusho kunye nengqondo. Aba bantu abanako ukufumana ingxaki, kuba ngamanye amaxesha awaziwa ukuba isisongelo esipheleleyo sikhona, umzekelo kuba abantu banqabile ukusebenzisana nophando. Ukuchonga uhlobo lwesifo kunye nobunzulu beengozi (i-acute okanye ayikho), kukho inkqubo yokuphuma kwexesha equlethwe kwezi zimbini zilandelayo:
Njengenyathelo kujongwa iya kwenza kube lula ukubona umntu 3 iintsuku - yaye xa besenza izifundo ityala ize ibhungisane usapho / izalamane - xa kukho urhano ngamandla kakhulu ukuba kukho ukuphazamiseka kwengqondo kakhulu kwaye kukho urhano lokuba leyo ebeka umntu ngokwakhe okanye indawo yakhe. Umzekelo, ukuba nondiliseko ingozi iyakumiselwa kwaye, ukuba kuyimfuneko, kodwa kuthathwa njengenyathelo likaxakeka, okanye kusetyenziswe ezinye uhlobo isiqabu. Akukho nonyango okwangoku.
Ukongezelela, lo Mthetho wenza ukuba kunokwenzeka ukuba unyameko olunyanzelekileyo lunganikwa phambi kwexesha elijongene neengxaki zeeyure ze-18. Oku kukhathazeka ngamacala apho kuqinisekileyo ukuba kuya kuthathwa umlinganiselo wenkxalabo, kodwa apho kuthatha ixesha lokuthatha umlinganiselo ngokwawo. Ngeli lixa ukuba anciphise ukuqaliswa kwale yokulinganisa esele kuyimfuneko inkululeko ngamnye okanye ukulawula amayeza ukuze ukumbopha kwaye wenze le meko elawulekayo.
Ngaphezu kwakho konke, umhlathi wokugqibela uyamangalisa. Ngoko unako ukubeka iiyure ze-18 kwiseli yokuzimela (inqandelelo yenkululeko) kwaye ufumane unyango, ukuba kukho krokreka likhona ukuba umlinganiselo wenkathazo uya kuthathwa. Kodwa ngaba kunjalo ukuvalelwa kunye namayeza ngokwayo ayikho ingxaki? Kwaye konke oku kuya kuqulunqwa ngumntu ongenakulungele ngokupheleleyo, oko kungengomgcini wezifo zengqondo (esingaba nobuchule obunjalo), kodwa umtshutshisi! Yintoni ke ibe yinkcazo 'ingxaki yengqondo"? Umbono ohlukileyo? Omnye ngcamango?
Ngokwengxenye ngenxa yengxelo yekomiti yeHoekstra, iNkonzo yoTshutshiso kaRhulumente ngoku inendima 'yomsebenzi wesicelo'. Oku kuthetha ukuba akukho kuphinda eli linge liba umlawuli zonyango yeziko abagula ngengqondo ukuba enze isicelo enkundleni yokhathalelo enyanzelekileyo, kodwa ukuba utshutshiso lo mntu yomtshutshisi apha unikwa indima engundoqo kunye esebenzayo.
Izizathu zezi zinto ziquka ukuba unyameko olunyanzelekileyo - nokuba ngaba ngenxa yesigulane nabanye - kunokubandakanya uhlobo lokuthintela inkululeko. Ukongeza, lo msebenzi uvela kwinkxaxheba ye-OM ekuqinisekiseni ukhuseleko loluntu. Kwaye ngokunyusa inxaxheba ephambili kwinkonzo yoTshutshiso kaRhulumente, umlawuli-ogqirha weziko lempilo yengqondo unokugxininisa emsebenzini wakhe wokunakekela.
Kwaye ke asizange sithethe ngendima yentsapho.
Isikhundla nokubandakanyeka kwentsapho kunye nabahlobo kuyaqiniswa. Ngokomzekelo, xa intsapho umntu bedidekile xa ucinga ulwazi esetyenziswe eyidalile unikeza, mhlawumbi ukuba ibhunga ukuba athumele isicelo kukhathalelo ezinyanzelekileyo nomtshutshisi. Oku kunokwenzeka ukuba ulawulo lwengingqi aluboni ukuba luyimfuneko. Nokuba umtshutshisi akuthethi ukuba iikhrayitheriya yokhathalelo esisinyanzelo kuyahlangatyezwana, intsapho ingafuna ukuba isicelo kukhathalelo esisinyanzelo kodwa ukuba angenise enkundleni ukuba ingcaciso evela kugqirha siye savela. Intsapho ingaqhubeka isaziwa xa icela unonophelo olunyanzelekileyo kwisihlobo. Ekugqibeleni, amalungu entsapho angenza imibono yabo yaziwe kwicebo lokunyamekela kwaye umcebisi weentsapho ufumana isiseko somthetho.
Oku kuthethwa kakhulu kukuthi zonke izizathu zifumaneke ukuba ziqoke abantu. Usapho lunokunyamekela oku (engaziwa, ngoko ke ngubani onokujonga ukuba intsapho iyayilandela); Umtshutshisi woLuntu unokunyamekela oku. Zonke izithintelo zisuswe. Kwaye konke oko kuba ingxelo yekomiti yeHoekstra kwimeko kaBart van U (umbulali nguEls Borst) oku kugqiba. Ukuba lo mbulali awusayi kufakwa ukuba usebenze lo myalelo wokukrakra, ngoko ke umangalisa ukuba ikomiti incike kwiimeko ze-1. Kukhulu kangakanani ithuba lokuhlala kwabemi base 17 ukuba into enjalo iyenzeka kwakhona? Kodwa ke sifuna ukukhuphela yonke into! Hayi, urhulumente ufuna ukuvala wonke umntu ngubani ongamthandiyo kwaye ngoku angakwazi ukuwasebenzisa ngokunyanisekileyo. Ngaba uqala ngokuqaphela ukuba yonke into yokubulala okanye ukuhlaselwa kwamaphekula (nokuba iyinyani okanye ayikho) ikhokelela kumanyathelo okukhwabanisa okubangela ukuba bonke abemi bakhululwe kwithambo?
Ingxoxo yowiso-mthetho namhlanje isetyenziswa ngokusemthethweni kwintando yesininzi 'ukukhohlisa okukhethiweyo'ukuqinisekisa kuphela. Uvota kwiqela elithile, uze ukhusele iimfuno zakho kwigumbi, yiloo nto. U-Nu.nl ubika kule ntsasa oku kulandelayo [catshulwa] I-Schippers ifuna ukukwazi ukuwamkela abantu abadidekile iintsuku ezintathu kunye nokusebenzisa imithi enyanzelekileyo. Abachasayo bathi, ke, ukuba umlinganiselo wokukhusela abantu uza kusetyenziswa ikakhulu kuba aba bantu bangasongela uluntu. Ngexesha elide lee-72 iiyure aba bantu abanjelwe kuzo, akukho unyango lwengqondo olwenzekayo. Ngaphezu koko, abachasi banokufumanisa ukuba ukukhuselwa ngokomthetho kwaba bantu kusemngciphekweni, kuba umlinganiselo ungenziwa ngaphandle kokungenelela kwejaji. ILungu lePalamente yePalamente uRenske Leijten ke lavela ngesiphakamiso sokufumana le ngongoma ethile kwisiphakamiso seSchippers, kwaye ngoku kuya kubalwa kwininzi kwiNdlu ngokuxhasa inkxaso ye-PvdA. I-SP kunye ne-PvdA ngoku ngamacandelo avunyelwe ukunikela nge-counter-gesi kwindawo yokubetha ngesandla. Kodwa yiyiphi inqaku elithile abayifunayo kwi-bill: iphuzu lokunyanga amayeza, ingongoma 'ngaphandle kokungenelela kwejaji'? Kakade, umthetho uya kushicilelwa nje. I-sauce yentando yesininzi isasaza phezu kwayo. Ingongelo yale bhili-mali inokuthi isitampu 'umntu odidekile' unokumiselwa kunoma yimuphi umntu. Ukuba akukho najaji okanye ingqondo yomntu oye wachaza kwangaphambili ukuba ngaba umntu owela phantsi kweli nqanaba, unokukhethwa esitratweni kusasa kwaye uphele kwi-cell isolation for observation, egcwele ipilisi. Ingaba ngaba iya kubachaphazela ngokwenene abantu asebebenyango okanye bebonakaliswe ukuba yingozi kummandla wabo, ngoko le ntlawulo ayiyi kufuna ukugqithisa ijaji okanye isifo sengqondo. Kufana nemilinganiselo elandelayo emva kokusongela. I mntakwabo omkhulu Amanyathelo karhulumente karhulumente asetyenziswa wonke umntu sicelo. Lo mthetho unako kwaye uza kusebenza kule nto wonke umntu sicelo. Emva koko, kukho kuphela kufuneka ukuba 'krokrela kakhulu'ukuba ubekho kwiNkonzo yoTshutshiso kaRhulumente ukuba uyingozi.
Ukunikezela isikhalazo kubalingisi bemibutho yezemidlalo IHague ayinayo nayiphi na impembelelo, eqinisweni, kodwa ukuyibonisa ubuncinane ibonisa ukuba abaninzi abavumelani nayo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: rijksoverheid.nl, nu.nl, nu.nl
Ipilisi yokuzibulala yoMphathiswa Edith Schippers iyinto eyiyo
tags: ingxoxo, Edith Schippers, eziziimbalasane, Ndoda, abantu, PVDA, SP, kwigumbi lesibini, ididekile, mthetho
2 Februwari 2017 kwi-11: 32
2 Februwari 2017 kwi-13: 23
I-movie enhle kakhulu Joris
Ngokuqinisekileyo akuyena yedwa ocinga ukuba kunjalo kwaye into embi kukuba zezikolo
kufuneka ngoku ngokuqhelekileyo kuthathwa njengesiqhelo, kwaye abantwana abahluphekileyo abazi kakuhle (isizukulwana esilandelayo silawulwa ngumatshini wepropaganda)
Kwaye abazali bayalinda ukuba bangatsho nto phantsi koxinzelelo lweqela, ngenxa yoko uya kugqitywa kunye nesiqendu sikaMartin ....
2 Februwari 2017 kwi-16: 10
Siyabonga. Uxinzelelo lwamaqela yingxaki enkulu idd. Ukubanjwa koLuntu.
2 Februwari 2017 kwi-17: 47
2 Februwari 2017 kwi-17: 52
2 Februwari 2017 kwi-18: 03
Olunye uphuhliso olukhathazayo. Ubulungisa buya kwiingcamango zobugebengu abancinci bujonga:
2 Februwari 2017 kwi-18: 02
Umbutho wabalingisi bahlala:
2 Februwari 2017 kwi-20: 01
Kwiminyaka edlulileyo ndabona ukuba kuza kwaye kwimeko engqongileyo ndayilumkisa ngeengozi zorhulumente ezixhomekeke kwitheknoloji kunye nendima yayo ebantwini. Kwaye ngoku ivela engqondweni yam kude kwaye ndikhangelekile
Akunakukukholelwa ... Ininzi elincinci limele livuke kwaye live, kuba kungenjalo lixesha elizayo kwizizukulwana ezizayo ezikhulayo entolongweni. Ngoku i ntolongo ayibonakali kwabo bangenayo (bafuna ukuyibona), kodwa kubabo abaneengcamango zangaphakathi nangaphandle.
Kungekudala akusayi kubaleka, ukukhawuleza kulapha kwaye ngoku!
2 Februwari 2017 kwi-20: 08
Owona mva uza kuba ngumntu obona umdlalo kwaye ubangele ingozi kwilizwe kunye nokuzimela kwayo ngamandla kunye nokulawula.
2 Februwari 2017 kwi-21: 35
Ukungabambisani ukukhwabanisa okanye ukugqithisa kwaye uthengise ukuthanda kwakho kunye nomphefumlo wakho kumtyholi kwiseli phantsi kwefuthe le-pharma enkulu
2 Februwari 2017 kwi-20: 18
Uphuhliso lwangaphakathi kwimeko yamapolisa luya kuqokelela ngokukhawuleza.
Ngaba ulandelayo ...?
2 Februwari 2017 kwi-20: 51
2 Februwari 2017 kwi-22: 36
I-Schippers iyazi isikhundla sayo ukususela kwi-Bilderberg 2014:
Umthetho kaBrute Force: Uhlobo Olwenene LoRhulumente
"Sifinyelela ngokukhawuleza ekuqhutyweni kwe-inversion yokugqibela: isigaba apho urhulumente akhululekile ukwenza yonke into, ngelixa yintoni isigaba somntu omnyama kunayo yonke imbali yomntu, isigaba sokulawula ngamandla. "
Ummiselo, sawaxwayisa, wawunikwe umntwana omtsha okanye urhulumente apho kungengomsebenzi ukuba ungenacala okanye unetyala, ukuba ungumhlali.
Amandla kunye nokunciphisa ngokusebenzisa imisebenzi yeflegi yamanga:
3 Februwari 2017 kwi-11: 03
Oku kubonakala kukunyanyisa, kodwa ....https://youtu.be/DKnNDrq0W0g
3 Februwari 2017 kwi-11: 17
MarcCornelis wabhala wathi:
3 Februwari 2017 kwi-17: 34
Indoda kaEdith Schippers inayo i-pharma enkulu njengenkampani
« Iidolophu eziMandla, igoli yedijithali iyafumaneka ngaphandle kokuba uyayiqonda
UTyerry Baudet ushaya phantsi noJeroen Dijsselbloem »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.517.793